“Weli UDUB baan daydayayaa” Wasiir Siciid Sulub | Berberanews.com
Home WARARKA “Weli UDUB baan daydayayaa” Wasiir Siciid Sulub
Hargeysa-(Berberanews)-Wasiirka Xannaanada Xoolaha iyo Kalluumaysiga Somaliland Siciid Sulub, ayaa sheegay inaanu ku qanacsanayn xisbiyada siyaasadeed ee ka jira Somaliland dhammaantood.
Wasiir Sulub waxa uu ku dhaliilay xisbiyada dalka ka jira inay yihiin kuwo dhiirigelinaya qabyaaladda “Hadda asxaabtii qaranka ayaa wada inay dadka qabaail u kala saaraan, waxaynu ku jirna in la yidhahdo qofka musharaxa ah ‘reerkiina soo kaxayso, oo cuqaashaadii meeday? Waxaynu ku bilownay qofka inaynu taageerayaashiisa weydiino.” Ayuu yidhi Wasiir Siciid Sulub oo hadal ka jeediyay furitaanka hudheelka cusub ee Isha Burco.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wataa waxaa uu yidhi “Halkii ugu horraysay ee xafiis laga furo markii aan dalka ku soo noqonau waxay ahayd Burco oo UDUB bay ahayd, doorashadii u horraysay waxaanu ku xidhnay shuruud in musharraxu keeno 150 qof oo taageerayaashaada ah oo qaadhaanka bixiya oo isku dhex jira.
Marka waxaan leeyahay bal saddexdeenan xisbi halaga guuro oo tobanka sanadood wax yar baa ka hadhay ee xisbiyo cusuboo qaranka isku xidha hala sameeyo.waxaan sidaa u leeyanay anigu maanta KULMIYE ayaan ka mid ahay, shalayna WADDANI baan ahaa, tii ka horraysana waxan ahaa aas aasayaashii xisbigii koowaad ee UDUB baan ahaa, kaygii markuu iga burburay dee waanigan silcee kolba mid gelaya, umana arko xisbiyo hagaagsan oo weli UDUB baan daydayayaa”.
Wasiir siciid sulub
Wasiirka xanaanada xoolaha Somaliland
Previous articleTurkiga oo ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee Maraykanka u dhaxaysa
Next article“Dadkii aan waxba beeranin way bakhtiyeen” Madaxweyne Biixi